“Mesut Ozil Waa Farshaxiste Kubadda Ka Dareema Dal-dalloolada Jidhkiisa Iyo Ruuxdaba, Arteta Na Way Muuqataa Inuu Fashilmay..” - Gool24.Net
“Mesut Ozil Waa Farshaxiste Kubadda Ka Dareema Dal-dalloolada Jidhkiisa Iyo Ruuxdaba, Arteta Na Way Muuqataa Inuu Fashilmay..”
Adrian Durham ayaa ku eedeeyey tababare Mikel Arteta inuu gabay shaqiisii Arsenal oo uu ka faa’iidaysan kari la’yahay laacibka ugu tayada badan kooxdaas ee Mesut Ozil oo uu hadda ka shaqaynayo sidii uu uga caydhin lahaa kooxda.
Ozil oo ah ciyaartoyga ugu mushaharka badan Arsenal, toddobaadkiina u xaadira lacag dhan £350,000 Gini ayaan ciyaarin tan iyo bishii March, waxaana kaba sii daran in xataa aan lagu darin liiska kooxda ee inta badan ciyaaraha oo aanu kaydkana kasoo muuqan.
Arsenal ayaa raadinaysa si ay uga takhalusto Ozil oo ay heshiiskiisa sannadku ka hadhsan yahay meesha uga saarto, laakiin waxa uu 31 jirkani ku adkaysanayaa in aanu meelna u soconin oo uu sii joogayo illaa inta uu heshiiskiisu ka dhamaanayo, isla markaana uu qaadanayo lacagtiisa wareerka ah ee mushaharka ah oo toddobaadkii ah £350,000 Gini.
Adrian Durham ayaa ku raacsan Arsene Wenger in Arteta uu dayacayo xiddig muhiim ah oo noociisa oo kale yaryahay, wax badanna u qaban lahaa haddii ay siin lahaayeen waqtiga iyo kalsoonida muhiimka u ah ciyaartoydu si ay heerkooda ciyaareed ee ugu wanaagsan usoo bandhigi karaan.
Durham oo tixraacayay buugga uu qoray Arsene Wenger ee magaciisu yahay ‘Arsene Wenger: May Life In Red And White’ ayaa waxa uu yidhi: “Ozil waa farshaxinste kubadda cagta ka dareema dhamaan dal-daloollada maqaarka jidhkiisa iyo ruuxdiisaba. Wuxuu u baahan yahay in si joogto ah loo dhiirigeliyo, waxa uu u baahan yahay inuu ku dhowaado tababarihiisa oo uu la yeesho xidhiidh kalsooni ku dheehan tahay. In lagu adkeeyo isaga waxba masoo kordhinayso.
“Sida dhamaan farshaxanisteyaasha, waxa uu Ozil u baahan yahay inuu dareemo in lagu taageerayo hal-abuurkiisa. Waxa uu leeyahay dareenka kubbad dhiibista iyo dareen layaab leh oo ah waqtiga ay tahay in kubadda la baaso.”
Durham oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray: “Hannaankiisa ciyaareed waa mid mucjiso ah oo ay ku jiraan waxyaabo isaga u fudud. Premier League waa tareen saacaddii socda 200km, Ozil mar walba kuma socdo xawaarahan laakiin waxa aad mar walba jeclaysanaysaa farshaxankiisa.”
Adrian Durham oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaa raaciyey: “Sidaa darteed, muhiim maaha inaan wax walba ku raacay Arsene Wenger laakiin waxa aan ku waafaqay hibada cajiibka ah ee Mesut Ozil.
“Laakiin in ciyaartoy aad lacagta sidaa u badan siinayso oo uu Mikel Arteta iska joojiyey inuu ciyaarsiiyo Mesut Ozil xataa iyaga oo lacagta bixinaya, waa nasiib-darro weyn, Mikel Arteta na wuu fashilmay.”